Hosodoko Info. About. What's This?
Apôkrifa (literatiora sy zavakanto)
Jolio II (papa)
Joany avy any Patmosy
Apôkrifa no ilazana ireo asa soratra na sary hosodoko, na sarivongana, na say sokitra, sns izay tsy voaporofo ny fahamarinny fifandraisany aminny olona lazaina fa nanoratra azy. Avy aminny teny grika hoe ἀπόκρυφος / apókryphos izay midika hoe "afenina" na "miafina" io teny io. Ny litaratiora dia ahitana lahatsoratra apôkrifa maro; ka ny sasany dia asa soratra mitantara ny fiainanilay lazainy hoe "mpanoratra". Atao hoe pseodepigrafa kosa ny asa soratra raha tsy marina ny maha mpanoratra ilay lazaina fa nanoratra azy. Eo aminny sehatry ny zavakanto toy ny sary hosodoko, ny sary sokitra, sari ...
Léonard de Vinci dia lehilahy italianina iray izay niaina taminny andronny Renaissance. Izy dia mpahay siansa, mpahay matematika, injeniera, mpamoron-javatra, mpahay rafi-batana, sokitra, mpanao mari-trano, bôtanista, mpahay mozika sy ny mpanoratra. Liana taminny zava-drehetra misy eo aminny natiora i Léonard de Vinci no sady liana taminny fomba fiasanny zava-drehetra. Nahay nianatra, namorona sy nanao zava-mahaliana maro isan-karazany ihany koa izy. Maro ny olona mihevitra fa Léonard de Vinci dia iray aminireo mpanao sary hosodoko lehibe indrindra taminny fotoana rehetra. Ny olona hafa mi ...
Ny Soeda, na fanjakani Soeda, dia firenena ao Eoropa avaratra ao aminny faritanini Skandinavia. Ny renivohiny dia Stockholm, ny isam-poniny dia 9 223 766 tenenina hoe soedoa. Ny teny tenenina dia ny fiteny soedoa. Ny fiteny finoa sy ny fiteny sami koa dia tenenina, indrindra any avarany. Misy matetika ny fitenim-paritra. Ny Soeda dia mizara sisintany amini Finlandy any avaratra atsinanana, amini Norvezy any avaratra sy any andrefana ary amini Danmarka any atsimo. Mpikambana ao aminny Vondrona Eoropeanina ny Soeda hatra ny 1995, fa tsy ao aminny faritra euro izy. Miaraka aminny velarantanin ...
I Sahara dia tany efitra lehibe ao aminny tapany avaratri Afrika izay mivelatra avy any aminny Ranomasimbe Atlantika hatrany aminny Ranomasina Mena, izy no tany efitra lehibe indrindra eto amboninny tany izay manana sakany mirefy 1.500 km sy halava mirefy 5.200 km avy any atsinanana miankandrefana ary velerana 9.000.000 km 2, ka ny 200.000 km 2 dia ahitana tany azo volena tsindraindray. Firenena iraika ambinny folo no mitsinjara ani Sahara, dia i Maroka sy i Aljeria sy i Tonizia sy i Libia sy i Ejipta sy i Maoritania sy i Malý sy i Nijera sy i Tsady sy i Sodàna ary i Sahara Andrefana. I Sa ...
Ny zavakanto, dia hetsiky ny olombelona, na vokatry ny hetsiny, manana tanjona mandamina ny zavatra mikasika ny fitsapa, ny fahatairana ary ny haranitan-tsaina. Ny dikany dia miova arakaraky ny toerana isiana sy arakaraky ny taona, ary tsy misy aminireo no tena ekenny rehetra. Izay antony isokajiana ny vokatra ara-javakanto arakaraky ny kolontsaina, ny mpanao sy ny fianarana. Araka ny fampiasana matetika nitranga nandritra ity taonjato faha 21 ity, ny zavakanto dia mandrakotra ny vokatry ny "zavakanto tsara" toy ny arsitektiora maritrano, ny sary sikotra, ny hosodoko, ny mozika, ny dihy ar ...
I Jolio II dia papa teratany frantsay tamin ny taona 1503 hatramin ny 1513. Teraka tamin ny 14 Desambra 1443 ary maty tamin ny 3 Martsa 1513 tao Roma izy. Ny fitondrany dia isanireo heverina fa tsara laza indrindra nandritra ny andron ny Fifohazan-tsaina. Giuliano Della Rovere no tena anarany. Nohosoran ny papa Siksto IV, izay dadatoany ihany, ho eveka izy. Nandritra ny naha eveka azy dia nanan-janaka vavy telo izy sady nangorona harena miavosa, nefa nandositra tany Frantsa izy rehefa tonga teo aminny fahapapana i Aleksandra VI i Rodrigo Borgia tamin ny taona 1492. Voafidy ho papa tamin ny ...
I Joany avy any Patmosy na Jaona avy any Patmo na Joany Mpahita na Jaona Mpahita dia anarana omena ny mpanoratra ny Bokinny Apokalipsy izay milaza ny tenany inefatra aminny anarana hoe "Joany" na "Jaona". Tokony ho tany aminny taona 95 any ho any no nanoratany. Ny mpanoratra ny Apokalipsy dia tsy namela zavatra ara-tantara ary ireo lovantsofina momba azy dia mifanohitra hatraminny vanimpotoana nanombohanny kristianisma. Araka ny fikarohanireo mpamakafaka lahatsoratra dia mety nanoratra taminny fiteny arameana na taminny fiteny hebreo i Joany, ka mahatongna ny petra-kevitry ny mpikaroka iza ...
Ny hosodoko dia taozavatry ny loko eo amina velarana iray. Aminny taozavatra tsotra, io teny io dia mamisavisa ny asa sy ny vokatrasa, lazaina hoe hosodoko. Afaka mandoko eo aminny rindrina, aminny taratasy, canvas, hazo, fitaratra, laky, tanimanga na simenitra. Ny hosodoko dia mety voahaingo aminny volamena ; aminny hosodoko moderna sasantsasany dia misy materialy hafa toy ny vovoka, ny tanimanga sy taratasy.
Bartolomé Esteban Murilo teraka taminny faramparanny Desambra 1617, natao batisa taminny 1 Janoary 1618 3 aprily 1682) dia mpanao hosodoko Baroque Espaniola.
Wolf Vostell dia mpanakanto, mpanao hosodoko, sokitra mizaka ny zom-pireneni Alemaina teraka ny 14 Oktobra 1932 tao Leverkusen, Alemaina ary maty ny 3 Aprily 1998 tao Berlin, Alemaina.